यस गर्मीमा सबै आवश्यकताहरूको लागि र्‍याम्प चार्जरहरू ग्याजेट समाचार
मिगुएल हर्नान्डेज | | Accesorios, ग्याजेटहरू
गर्मी आउँदैछ र यसको साथ यात्रा गर्दैछ। समस्या यो हो जब हामी यात्राको लागि आवश्यक सबै सामानहरू संकलन गर्ने क्षणमा छौं, कम्प्युटर चार्जर, स्मार्टवाच चार्जर, स्मार्टफोन चार्जर ... एक वास्तविक पागलपन! त्यसैले आज हामी तपाईंलाई केहि विकल्पहरू देखाउँदछौं।
र्याम्पो एक एशियाई ब्राण्डका सबै प्रकारका सामानहरूको निर्माता हो, र यस समयमा हामी मिश्रित चार्जरहरूको एक सूची प्रस्तुत गर्दछौं जुन तपाईंलाई यस गर्मीमा साथ दिन सक्दछ। यी तीन विकल्पहरू पत्ता लगाउनुहोस् जुन हामीले तपाईंलाई देखाउँदछौं र त्यो निश्चित रूपमा काममा आउन सक्छ त्यसैले तपाईंसँग तपाईंको सुटकेस केबुलले भरिएको छैन।
1 पावर डेलिभरी र द्रुत चार्ज 3.0.०
2 पावर डेलिभरी and.० र W 3.0W सम्म
3 द्रुत चार्ज 3.0.० सम्म W W W सम्म
पावर डेलिभरी र द्रुत चार्ज 3.0.०
हामी बहुमुखीबाट शुरू गर्छौं, यस चार्जरसँग दुई पोर्टहरू छन्, एक USB-C पावर डेलिभरी र क्वालकॉम USB-A द्रुत चार्ज 3.0.० पोर्ट। यसले हामीलाई हामीले प्रयोग गरिरहेको उपकरणमा 36 we डब्लु सम्मको शक्ति सुनिश्चित गर्दछ। यसले हामीलाई आईफोन वा सामसु Galaxy ग्यालेक्सी एस २० जस्ता मोबाइल उपकरणहरू मात्र चार्ज गर्न अनुमति दिनेछ, तर हामी म्याकबुक एयर वा एप्पलको म्याकबुक जस्ता केही ल्यापटपहरू पनि चार्ज गर्न सक्षम हुनेछौं। यसैकारण हामी यस द्रुत चार्जरको सबैभन्दा बहुमुखीको रूपमा बोल्छौं जुन हामी आज कुरा गर्ने छौं।
कोड I7AXQC5L प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंसँग %२% छुट हुनेछ, जुन यसलाई १..32eमा छोड्नेछ। > खरीद लिंक
यो चार्जर दुई दुई र colorsमा किन्न सकिन्छ, दुई सेतो र कालो, यद्यपि म सधैं स्थायित्वका लागि कालो सिफारिश गर्दछु। योसँग सबै प्रकारका ओभरलोडहरू विरूद्ध संरक्षण प्रणाली छ, साथ साथै यसलाई हाम्रो अनमोल मोबाइल उपकरणमा पुग्न रोक्न सर्ट सर्किट रोक्ने प्रणाली छ। विशेष गरी राम्रो चार्जरको साथ स्मार्टफोन चार्ज गर्न महत्त्वपूर्ण छ। यो कसरी हुन सक्दछ, हामीसँग उच्च तापमान संरक्षण प्रणाली पनि छ, किनकि सबै प्रकारको द्रुत चार्जिंगले केही उपकरणहरूमा अत्यधिक तताउने निम्त्याउँदछ।
पावर डेलिभरी and.० र W 3.0W सम्म
अब हामी सबैभन्दा "आधुनिक" को कुरा गर्छौं। यो विशेष गरी यूएसबी-सी पोर्ट छ कि मोबाइल उपकरण चार्ज को लागी सिफारिश गरीन्छ। यसको डुअल USB-C पावर डेलिभरी 3.0.० पोर्टको लागि धन्यवाद, यो प्रत्येक पोर्टको लागि amp एम्पहरू प्रदान गर्न सक्षम छ, यसैले द्रुत चार्ज fast.० द्रुत चार्ज प्राप्त गर्न। सबै उपकरणहरूको लागि एक साथ। यससँग एक बुद्धिमान उपकरण पत्ता लगाउने प्रणाली छ, यसको मतलब यो हो कि यदि हामी कनेक्ट गर्दैछौं भने पनि यसले पहिचान गर्न सक्दछ, उदाहरणका लागि, एक ल्यापटप र यसैले यसलाई आवश्यक उर्जा प्रदान गर्दछ, यद्यपि यस अवस्थामा हामी केवल यूएसबी-सी मात्र प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं। पोर्टहरू। यो उपकरणमा न कि अधिक र न आवश्यक शक्ति भन्दा कम, W०W सम्म एकसाथ प्रशासन गर्दछ।
कोड SD8VKNQB प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंसँग of 35 छुट छ, तपाईं यसलाई मात्र € १.13,65> खरीद गर्नुहोस् लिंकमा खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
हामीले आज कुरा गरिरहेका बाँकी रैम्पो उपकरणहरू जस्तै हामीसँग अतिरिक्त भार, छोटो सर्किटको रोकथाम र उच्च तापक्रमको बिरूद्ध संरक्षण छ। W 36 डब्ल्यूसम्मको यस चार्जरको साथ हामी यस उपकरणलाई वरपर चार्ज गर्न सक्षम हुनेछौं हामी devices०% छिटो हामी क्लासिक W डब्ल्यू चार्जरको साथ धेरै उपकरणहरू समावेश गर्दछ। थप रूपमा, र्‍याम्पले प्याकेजमा समावेश गरिएको कार्डमा निर्दिष्ट गरे अनुसार "आजीवन" वारेन्टी प्रदान गर्दछ। यस लेखमा उल्लेख गरिएको अघिल्लो एडेप्टरको साथ, हामीसँग सेतो र कालो बीच छनौट गर्न दुईवटा र have्गहरू छन् जुन तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्दछ?
द्रुत चार्ज 3.0.० सम्म W W W सम्म
हामी अब सबैभन्दा शक्तिशाली, एक र्‍याम्पो चार्जरको बारेमा कुरा गर्दैछौं जुन 39 W डब्लू सम्मको शक्ति प्रदान गर्दछ, बौद्धिक रूपमा आवश्यक शक्ति वितरण गर्न सक्षम छ कि उपकरणसँग द्रुत चार्ज comp.० अनुकूलता छ कि छैन। उही तरीकामा, यसको भोल्टेज र उच्च तापमान प्रतिरोध प्रति संरक्षण छ, हामी समान उर्जाको एक प्रमाणित उत्पादनबाट कम अपेक्षा गर्न सक्दैनौं। म हाम्रो उपकरणहरू जडान गर्दा राम्ररी निर्मित चार्जर प्रयोगको महत्त्वमा जोड दिन चाहन्छु, किनकि यस प्रकारका सामानहरूमा बचत गर्दा हामीलाई महत्त्वपूर्ण अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ।
र्यामपाउ क्विक चार्ज 3.0.० ...
यस पटक हामीसँग मात्र यो कालोमा उपलब्ध छ, तर यसमा कम्प्याक्ट डिजाइन छ जुन अन्य प्लगहरू ब्लक गर्दैन, किनकि यसले अन्य प्रकारका धेरै ठूला चार्जरहरूमा गर्दछ। यो आईफोन ११ प्रो वा हुवावे मेट Pro० प्रो जस्ता उपकरणहरूसँग विश्वव्यापी रूपमा उपयुक्त छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » ग्याजेटहरू » यस गर्मीमा सबै आवश्यकताहरूको लागि र्‍याम्प चार्जरहरू
काम गर्ने पीसीको लागि उत्तम निःशुल्क अनलाइन एन्टिभाइरस के हो?